နာမည်ကြီးကစားသမားတွေကို ခေါ်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပြီးမှ လက်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ အသင်းများ
9 Aug 2018 . 4:00 PM
ဘောလုံးလောကမှာ ကစားသမားတစ်ဦးရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဆိုတာက လောင်းကစားဆန်လွန်းပါတယ်။ ခြေစွမ်းမကောင်းဘူးထင်လို့ လက်လွှတ်ခဲ့ပြီးမှ တခြားအသင်းမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့တာမျိုး၊ တခြားအသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့ပေမယ့် ကိုယ့်အသင်းကျမှ သုံးစားလို့ မရတော့တာမျိုးစတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေက အရင်ကလည်းရှိခဲ့သလို နောက်လည်းရှိနေဦးမှာပဲ။ အခုဖော်ပြမယ့်ဖြစ်ရပ်တွေကတော့ နာမည်ကြီးကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့နီးစပ်ပြီးမှ အထမမြောက်ခဲ့တဲ့ အသင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် . . .
ကာကာ Kaka (မန်စီးတီး)
၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက အာရပ်ငွေကြေးတွေ စီးဆင်းမှုနဲ့အတူ ထင်တိုင်းစကြဲခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ အေစီမီလန်အသင်းရဲ့ ဘရာဇီးလ်နာမည်ကျော်ကစားသမား ကာကာ Kaka ကို ခေါ်ယူဖို့ အရမ်းနီးစပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင် မန်စီးတီးအသင်းက ကာကာအတွက် ပေါင်(၁၀၈)သန်းအထိ ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ လက်တစ်ကမ်းအလိုမှ ရီးယဲလ်ကို ပြောင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
စတီဗင်ဂျရတ် Steven Gerrard (ချယ်လ်ဆီး)
လီဗာပူးလ်အသင်း ၂၀၀၅ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီးချိန်မှာ အသင်းခေါင်းဆောင် စတီဗင်ဂျရတ် က အသင်းက ထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ဂျရတ်ကို ခေါ်ဖို့ မော်ရင်ဟို Mourinho ရဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းက အသည်းအသန် ကြိုးပမ်းနေချိန်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှ ဂျရတ်က သူ့စိတ်ကို ပြောင်းလဲခဲ့သလို လီဗာပူးလ်မှာပဲ ဆက်ကစားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လီဝန်ဒေါစကီး Lewandowski (ဘလက်ဘန်း)
ဘလက်ဘန်းအသင်းကလည်း လီဝန်ဒေါစကီးကို ခေါ်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပြီးမှ ဘာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခုကြောင့် ပျက်ပြယ်ခဲ့ရတာပါ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တုန်းက ပိုလန်ကလပ် လက်ခ်ျပေ့ါဇ်နန်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး လီဝန်ဒေါစကီးကို ဘလက်ဘန်းအသင်းက ပေါင်(၄)သန်းနဲ့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ဘလက်ဘန်းအသင်းဆီ လာဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ အိုက်စလန်မှာ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပြာတွေ ဖုံးလွှမ်းနေလို့ လေကြောင်းလိုင်းတွေ ခဏရပ်ဆိုင်းထားတဲ့အတွက် အပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ တကယ်လို့သာ လီဝန်ဒေါစကီး ဘလက်ဘန်းကို ရောက်ခဲ့ရင် အခုလို အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ပါ့မလား . .
ရှက်ဗ်ချင်ကို Shevchenko (၀က်စ်ဟမ်း)
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှူးတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ယူကရိန်းဂန္ထ၀င် ရှက်ဗ်ချင်ကိုကို ၀က်စ်ဟမ်းအသင်းက ခေါ်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ပရိသတ်တွေက ပုံပြင်လာပြောနေတယ်လို့ ထင်ကြမယ်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တုန်းက ယူကရိန်းကလပ် ဒိုင်နမိုကိဗ်အသင်းမှာ မထင်မရှားဖြစ်နေတဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့် ရှက်ဗ်ချင်ကိုရဲ့ခြေစွမ်းကို ၀က်စ်ဟမ်းနည်းပြဟယ်ရီရက်ဒ်နက်ပ် Redknapp က သတိပြုမိခဲ့ပြီး အသင်းမှာ အစမ်းလေ့ကျင့်ခန်းလာဆင်းတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အပြောင်းအရွှေ့က မဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။
အီဘရာဟီမိုဗစ် Ibrahimovic (အာဆင်နယ်)
၂၀၀၀ ခုနှစ်တုန်းက အာဆင်နယ်နည်းပြ အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger ဟာ ဆွီဒင်ကြယ်ပွင့် အီဘရာဟီမိုဗစ်ကို သူ့အသင်းဆီ လာဖို့ ခေါ်ခဲ့ပြီး ကျောနံပါတ်(၉)ကို ၀တ်ဆင်ဖို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပြီးခါမှ အာစင်ဝင်းဂါးက အီဘရာဟီမိုဗစ်ကို အသင်းမှာ အစမ်းလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ချိန်မှာ အီဘရာဟီမိုဗစ်က လက်မခံဘဲ ငြင်းဆန်ခဲ့တာကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးကို လက်လွှတ်ခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အီဘရာဟီမိုဗစ်က “ကျွန်တော့်လို ကစားသမားမျိုးက အစမ်းလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းဖို့ လိုအပ်သူမဟုတ်ပါဘူး။ လေလံတင်သလို အနေအထားမျိုး ကျွန်တော် မကြိုက်လို့ပါ”လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူခွင့်ရဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပြီးမှ လက်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပါပဲ။ တကယ်လို့ ဒီအပြောင်းအရွှေ့တွေသာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီကစားသမားတွေရဲ့ အနာဂတ်က ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ . . . .
နာမညျကွီးကစားသမားတှကေို ချေါဖို့ နီးစပျခဲ့ပွီးမှ လကျလှတျခဲ့ရတဲ့ အသငျးမြား
ဘောလုံးလောကမှာ ကစားသမားတဈဦးရဲ့ အပွောငျးအရှဆေို့တာက လောငျးကစားဆနျလှနျးပါတယျ။ ခွစှေမျးမကောငျးဘူးထငျလို့ လကျလှတျခဲ့ပွီးမှ တခွားအသငျးမှာ လြှမျးလြှမျးတောကျ အောငျမွငျခဲ့တာမြိုး၊ တခွားအသငျးမှာ ခွစှေမျးပွခဲ့ပမေယျ့ ကိုယျ့အသငျးကမြှ သုံးစားလို့ မရတော့တာမြိုးစတဲ့ ဖွဈရပျတှကေ အရငျကလညျးရှိခဲ့သလို နောကျလညျးရှိနဦေးမှာပဲ။ အခုဖျောပွမယျ့ဖွဈရပျတှကေတော့ နာမညျကွီးကစားသမားတှကေို ချေါယူနိုငျဖို့နီးစပျပွီးမှ အထမမွောကျခဲ့တဲ့ အသငျးတှပေဲဖွဈပါတယျ . . .
ကာကာ Kaka (မနျစီးတီး)
၂၀၀၉ ခုနှဈတုနျးက အာရပျငှကွေေးတှေ စီးဆငျးမှုနဲ့အတူ ထငျတိုငျးစကွဲခဲ့တဲ့ မနျစီးတီးအသငျးဟာ အစေီမီလနျအသငျးရဲ့ ဘရာဇီးလျနာမညျကြျောကစားသမား ကာကာ Kaka ကို ချေါယူဖို့ အရမျးနီးစပျခဲ့တယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးကဆိုရငျ မနျစီးတီးအသငျးက ကာကာအတှကျ ပေါငျ(၁၀၈)သနျးအထိ ပေးခဲ့တာဖွဈပွီး အပွောငျးအရှဖွေ့ဈလာဖို့ လကျတဈကမျးအလိုမှ ရီးယဲလျကို ပွောငျးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
စတီဗငျဂရြတျ Steven Gerrard (ခယျြလျဆီး)
လီဗာပူးလျအသငျး ၂၀၀၅ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ဆှတျခူးခဲ့ပွီးခြိနျမှာ အသငျးခေါငျးဆောငျ စတီဗငျဂရြတျ က အသငျးက ထှကျခှာခှငျ့ပေးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ စိတျဆိုးဒေါသထှကျခဲ့ကွတယျ။ ဂရြတျကို ချေါဖို့ မျောရငျဟို Mourinho ရဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးက အသညျးအသနျ ကွိုးပမျးနခြေိနျဖွဈပွီး နောကျပိုငျးမှ ဂရြတျက သူ့စိတျကို ပွောငျးလဲခဲ့သလို လီဗာပူးလျမှာပဲ ဆကျကစားဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
လီဝနျဒေါစကီး Lewandowski (ဘလကျဘနျး)
ဘလကျဘနျးအသငျးကလညျး လီဝနျဒေါစကီးကို ချေါဖို့ နီးစပျခဲ့ပွီးမှ ဘာမဟုတျတဲ့ အကွောငျးလေးတဈခုကွောငျ့ ပကျြပွယျခဲ့ရတာပါ။ ၂၀၁၀ ခုနှဈတုနျးက ပိုလနျကလပျ လကျချြပေ့ါဇျနနျအသငျးမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ လူငယျတိုကျစဈမှူး လီဝနျဒေါစကီးကို ဘလကျဘနျးအသငျးက ပေါငျ(၄)သနျးနဲ့ ကမျးလှမျးခဲ့ပွီး ဘလကျဘနျးအသငျးဆီ လာဖို့ စီစဉျခဲ့ပမေယျ့ အဲဒီအခြိနျမှာ အိုကျစလနျမှာ မီးတောငျပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ ပွာတှေ ဖုံးလှမျးနလေို့ လကွေောငျးလိုငျးတှေ ခဏရပျဆိုငျးထားတဲ့အတှကျ အပွောငျးအရှမေ့ဖွဈခဲ့ဘူး။ တကယျလို့သာ လီဝနျဒေါစကီး ဘလကျဘနျးကို ရောကျခဲ့ရငျ အခုလို အောငျမွငျမှုတှေ ရယူနိုငျပါ့မလား . .
ရှကျဗျခငျြကို Shevchenko (ဝကျဈဟမျး)
ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှူးတှထေဲမှာ တဈဦးအပါအဝငျအဖွဈ သတျမှတျခံခဲ့ရတဲ့ ယူကရိနျးဂန်ထဝငျ ရှကျဗျခငျြကိုကို ဝကျဈဟမျးအသငျးက ချေါဖို့ နီးစပျခဲ့တယျဆိုရငျ ပရိသတျတှကေ ပုံပွငျလာပွောနတေယျလို့ ထငျကွမယျ။ ၁၉၉၄ ခုနှဈတုနျးက ယူကရိနျးကလပျ ဒိုငျနမိုကိဗျအသငျးမှာ မထငျမရှားဖွဈနတေဲ့ လူငယျကွယျပှငျ့ ရှကျဗျခငျြကိုရဲ့ခွစှေမျးကို ဝကျဈဟမျးနညျးပွဟယျရီရကျဒျနကျပျ Redknapp က သတိပွုမိခဲ့ပွီး အသငျးမှာ အစမျးလကေ့ငျြ့ခနျးလာဆငျးတဲ့အထိ ဖွဈခဲ့ပမေယျ့လညျး အပွောငျးအရှကေ့ မဖွဈလာခဲ့ပါဘူး။
အီဘရာဟီမိုဗဈ Ibrahimovic (အာဆငျနယျ)
၂၀၀၀ ခုနှဈတုနျးက အာဆငျနယျနညျးပွ အာစငျဝငျးဂါး Arsene Wenger ဟာ ဆှီဒငျကွယျပှငျ့ အီဘရာဟီမိုဗဈကို သူ့အသငျးဆီ လာဖို့ ချေါခဲ့ပွီး ကြောနံပါတျ(၉)ကို ဝတျဆငျဖို့သတျမှတျခဲ့တယျ။ အားလုံးအဆငျပွပွေီးခါမှ အာစငျဝငျးဂါးက အီဘရာဟီမိုဗဈကို အသငျးမှာ အစမျးလကေ့ငျြ့ခနျးဆငျးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ခြိနျမှာ အီဘရာဟီမိုဗဈက လကျမခံဘဲ ငွငျးဆနျခဲ့တာကွောငျ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှူးတဈဦးကို လကျလှတျခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး အီဘရာဟီမိုဗဈက “ကြှနျတေျာ့လို ကစားသမားမြိုးက အစမျးလကေ့ငျြ့ခနျးဆငျးဖို့ လိုအပျသူမဟုတျပါဘူး။ လလေံတငျသလို အနအေထားမြိုး ကြှနျတျော မကွိုကျလို့ပါ”လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဒါတှကေတော့ နာမညျကြျောကစားသမားတှကေို ချေါယူခှငျ့ရဖို့ နီးစပျခဲ့ပွီးမှ လကျလှတျခဲ့ရတဲ့ဖွဈရပျတှပေါပဲ။ တကယျလို့ ဒီအပွောငျးအရှတှေ့သော တကယျဖွဈခဲ့ရငျ ဒီကစားသမားတှရေဲ့ အနာဂတျက ဘယျလိုပွောငျးလဲသှားမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ . . . .